Akụkọ - Ịkụ azụ na Oke Osimiri Zhoushan
Iji kwalite njikọta otu, wusie nkwukọrịta n'etiti ndị ọrụ ike, kwalite mmetụta dị n'etiti ndị ọrụ, wee mepụta ọdịmma ụlọ ọrụ dị mma na ahụike, ụlọ ọrụ anyị haziri ndị ọrụ niile ka ha rụọ "ọrụ obi ụtọ, ịdị n'otu na imekọ ihe ọnụ, ịsụ ụzọ na ihe ọhụrụ" na Julaị 18, 2021. Ọrụ mmemme. Dika mkparịta ụka onye ọ bụla si dị, edobere adresị ọrụ ụlọ otu ahụ dịka Nansha Beach, Zhujiajian, Zhoushan.
Zhujiajian bụ ebe nlegharị anya nke mba, nke dị na ndịda ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti Zhoushan, Province Zhejiang. A na -akpọkwa ya Putuo Mountain isi obodo mara mma nke nwere “Alaeze Buddha Haitian” 1.35 kilomita. Ọ bụ mpaghara njem nlegharị anya nke agwaetiti Zhoushan, “Putuo Golden Triangle” Akụkụ dị mkpa n'ime ya bụ agwaetiti nke ise kacha ibu na Zhoushan Archipelago, nke nwere mpaghara square kilomita 72. Na 2009, edepụtara ya dị ka ebe nlegharị anya AAAA nke mba.
“Shili Jinsha” nwere ọmarịcha ájá, dị nro dị ka blanketị, mkpọda osimiri dị nro na mpaghara oke osimiri.
Site n'ụsọ osimiri ọlaedo, ikuku oke osimiri, na oke osimiri na -acha anụnụ anụnụ, anyị enweghịzi ike igbochi agụụ ịnabata oke osimiri.
N'eluigwe, achọrọ m ịbụ nnụnụ ịhụnanya, m ga -erikwa barbecue n'ime ala. N'uhuruchi, anyị na -afụ ikuku n'oké osimiri n'ụsọ osimiri, dozie stovu ahụ, kpọnwụọ akpọnwụ, nụ mmanya ahụ.
Oké osimiri sara mbara, dịkwa ebube, yana yana ọnye. N'ọnọdụ a, ugbu a, anyị na -adabere na igwe kwụ otu ebe, na -ele anya n'oké osimiri, na -akparịta ụka, na -aghọta ma na -elekọta ibe anyị.
E nwere nnukwu owuwe ihe ubi mgbe a na -egbu azụ n'oké osimiri, ụgbọ mmiri ndị ahụ juputara na nri mmiri. Nke a bụ ọ joyụ nke owuwe ihe ubi bara ụba.
Ọrụ ụlọ otu ahụ bịara na nkwubi okwu na -aga nke ọma, na obi ụtọ na obi ụtọ nke onye ọ bụla karịrị okwu ọnụ.
Site na mmemme a, ọ bụghị naanị nkwurịta okwu na imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị ọrụ ka ewusiri ike, kamakwa mkpa onye ọ bụla nwere mmetụta dị mkpa, imekọ ihe ọnụ na ntụkwasị obi. Onye ọ bụla kwuru na n'ọlụ na-abịa n'ihu, ha kwesịrị ijikọ mmụọ nke ịdị n'otu na enyemaka e gosipụtara n'ihe omume ụlọ otu n'ime ọrụ ha, ma rụkọọ ọrụ ọnụ iji nye onyinye na mmepe ụlọ ọrụ dị elu.